BMI – 04 (Smart Island + Pear Farming Area + Dome Pale Aw Village) – Blissful Myanmar
At Least –6Pax
Local – 95000 MMK
Foreigner – 95 USD
Our Marine Guide will pick you up during 7:30 am – 8:00 am at your Hotel lobby after having your Breakfast. Depart from Seik Nge Jetty about 8:10 am. Along your way, you can enjoy the scenery of Mergui Archipelago.
လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးချိန် နံနက် (၇း၃၀ – ၈း၀၀) နာရီကြားတွင် ကျွန်တော်တို့၏ ဧည့်လမ်းညွှန် (Marnie Guide) မှဟိုတယ်တွင်လာကြိုမည်ဖြစ်သည်။ (၈း၀၀)အချိန်တွင် ဆိပ်ငယ်ဘောတံတားမှစတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
Smart Island (ပါပန့်ကျွန်း)
First, we will arrive at Smart Island where we can feel the nature of pristine island. It hasabeautiful Stone beach and three white sandy beaches. We can do swimming, sunbathing, snorkeling the beautiful corals and colorful fishes and taking capture of our groups. Then we will have our lunch on that beach. After lunch we will takearest forawhile and enjoy the scenery of the island.
ပထမသွားရောက်မည့် နေရာမှာ ပါပန့်ကျွန်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျွန်းတွင်သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ကျောက်လုံးကမ်းခြေ၊ အလွန်ဖြူဖွေးသောသဲကမ်းခြေ နှင့် ရေအောက်အလှများကြောင့် လူသိများထင်ရှားသည်။ ထိုကျွန်းတွင် ရေကူး၊ ရေငုပ်၊ Snorkeling လုပ်ကာ ရေအောက်အလှများကို ခံစားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ နေ့လည်စာ ကို ထိုကျွန်း၌ပင်သုံးဆောင်ကြမည်။
Pearl Farming Area (ပုလဲတံခွန်စခန်း)
Then we will continue to the Pearl Farming Area. Where we can experience about the Oysters are farming under the sea water with the long line, can learn how to keep and store the Oysters in the floating house and can explore about how to hatch, graft and harvest the pearl in the operation theatre. And they will show the video presentation of Pearl Farming Processing. And the last interesting news is you can buy the different sort of pearl and some oyster shell products there.
ထိုနောက် ဆက်လက်သွားရောက်မည့်နေရာမှာ ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်းဖြစ်ပါသည်။ ပုလဲတံခွန်စခန်းတွင် မုတ်ကောင်များကို Long Line များဖြင့် ပင်လယ်ရေအောက်တွင် မွေးမြူထားရှိပုံ၊ ရေပေါ်အလုပ်ရုံ (Floating House) များပေါ်တွင်ပြုစုထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ပုံ၊ မုတ်ကောင်သားဖောက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပုံ၊ ပုလဲဝတ်ဆံ
သွင်းပုံ နှင့် မုတ်ကောင်မှပုလဲထုတ်ယူပုံ အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာတွေ့မြင်ရပါမည်။ နောက်ဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော သတင်းမှာ ထိုပုလဲတံခွန်စခန်းတွင် ပုလဲမျိုးစုံနှင့် မုတ်ကောင်အခွံမှထုတ်လုပ်သော လူအသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Dome Paleဲ Aw Monken Village (ဒုံးပုလဲအော် ဆလုံရွာ)
Next we will continue to Dome Pale Aw Monken Village where has three ethnic groups – Karen, Buma and Moken. We will visit in the village and we can explore about their ways of life and can chat with those of Families.
ထိုနောက်ဒုံးပုလဲအော်ရွာသို့ဆက်လက်သွားရောက်ပါမည်။ ထိုရွာလေးသည် ကရင်၊ ဗမာ၊ ဆလုံလူမျိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ရွာထဲသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ရွာသားများ၏ ဓလေ့၊ နေထိုင်မှုပုံစံများကို လေ့လာနိုင် ပါသည်။
After all, we will come back to Myeik about 5:00 PM. ညနေ (၅) နာရီ မြိတ်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
# Car Transfer (Hotel / Jetty)
# Marine Guide
# Speed Boat along your trip
# Life Jackets & Snorkeling Gears
# Lunch, Snacks & Fruit
# Drinking Water, Coffee & Soft Drink
# Entrance Fee & Travel Insurance
# ကားအကြို/ အပို့ (ဟိုတယ်/ လှေဆိပ်)
# Speed Boat (ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်)
# အသက်ကယ်အကျီင်္ နှင့် Snorkel ပစ္စည်း
# သောက်ရေသန့်၊ ကော်ဖီ နှင့် အအေး
# ဇုံဝင်ကြေး နှင့် ခရီးသွားအာမခံ
Bringing jewellery and other valuable things are prohibited. We have no responsibility for any loss. Our itinerary can be changed depend on the tide and weather.